ZTE Axon 30 Pro wuxuu la imaan lahaa kamarad 200 MP ah | Androidsis
ZTE Axon 30 Pro waxaa lagu bilaabi karaa kaamirada 200 MP ee Samsung
Waxaan si fiican u ognahay in ZTE uu jecel yahay inuu noqdo kan ugu horreeya waxyaabo badan, illaa iyo inta ay khuseyso warshadaha casriga ah. Shirkadda Shiinaha ayaa ahayd tii ugu horreysay ee soo bandhigta taleefan casri ah oo wata xusuusta LPDDR5 RAM, iyada Axon 10s Pro, Halkaas bishii Febraayo ee sanadkii hore. Markaas ayuu bilaabay Axon 20 5G, mobiilkii ugu horeeyey ee wata kamarad sawir qaade ah shaashadda hoosteeda
Hadda, shirkaddu sidoo kale waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee soo bandhigta taleefan casri ah oo leh 200 MP shidma weyn, ama uguyaraan tani waa waxa soo ifbaxay ee cusub ee dhowaan ka soo ifbaxay Weibo, shabakadda bulsheed ee microblogging ee Shiinaha, ayaa tilmaamaysa.
ZTE Axon 30 Pro wuxuu kubilaabmi doonaa filashadii mana uusan shaacin wali 200 MP sensor Samsung
Dareenka S5KGND ee Samsung waa midka soo bandhigaya xalka 200 MP Ugu dambeyntiina, waxay bixin doontaa tallaalada 50 MP iyada oo ay ugu mahadcelineyso 4-1 pixel binning technology. Midkani wali kuma dhawaaqin soo saaraha Kuuriyada Koonfureed, laakiin waa inaan si dhakhso leh uga maqalnaa.
Axon 30 Pro oo ka socda ZTE, sida ku cad waxa soosaara caan ah oo shaaca ka qaaday, oo ay weheliyaan hawl wadeen ka socda shirkadda, ayaa noqon doona kan xambaarsan qaybtan sawir qaadista ah. Suurtagal sidoo kale taleefankii ugu horreeyay ee suuqa soo mara ee iska leh, si dareemahu ugu horreeyo uu ula socdo taleefanka.
Kuwa la daabacay kuwa Qualcomm Snapdragon 888, Chipset-ka ku hoos jiri doona daboolka Axon 30 Pro. Tani nama ahan wax lala yaabo, maxaa yeelay waxaan ka hadleynaa taleefan heer sare ah. Si kastaba ha noqotee, waxay ku raacsan tahay waxa shaaca ka qaaday Samsung 200 MP sensor, maaddaama ISP Spectra 580 ee Snapdragon 888 ay awood u leedahay inay taageerto kamaradaha xallinta ugu badnaan.
Ma jiraan faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan S5KGND weli, laakiin waxaa la sheegay inay taageerto laba nooc oo koox kooxeed ah: 4-in-1 iyo 16-in-1, oo soo saaraya 50 MP iyo 12.5 MP oo wali sawiradooda si wax ku ool ah u kala horreeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » ZTE Axon 30 Pro waxaa lagu bilaabi karaa kaamirada 200 MP ee Samsung
Heerarka aan dhammaadka lahayn ee kubbadda Infinity ee aan caadiga ahayn
Google ayaa u oggolaan doonta codsiyada khamaarka lacagta dhabta ah ee Spain iyo 14 dal oo cusub